MSF oo gobolka Shabeelaha Dhexe ku soo gabagabeysay howlgal ka dhan ah cudurka daacuunka - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
17.05.2012 | Gobolka Shabeelaha Dhexe, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, Qeybta Guud, Taakulada Soomaalida
Kooxaha MSF ee gobolka Shabeelaha dhexe waxey la dagaalameen cudurka daacuunka oo ka dilaacay gobolkaas dhamaadkii bishii Maasrso. Ka dib markii la xaqiijiyey in qofkii ugu horeyeey lagu helay cudurka ayaa waxaa hay’adda ay ka furtay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe xarun lagu daaweeyo daacuunka taariikhdu marka ay hayd 28da bisha March waxaana xarunta la jiifiyey ilaa 77 qof. 2 canug oo da’adoodu ay yartahay ayaa geeriyooday ka dib markii xarunta MSF la keenay iyagoo aad ula il daranaa cudurka; 75ta kale daaweeyntoodu waa lagu guuleystay. Inta badan bukaanka uu cudurka ku dhacay waxaa ay ahaayeen caruur. Kasokow daaweynta cudurka, MSF waxaa ay daawo ku dartay goobaha biyaha laga helo waxeyna bulshada deegaanka u qeybisay daawada biyaha lagu nadiifiyo.
Ka dib markii 2dii todobaad ee la soo dhaafay an xarunta la keenin bukaan qaba cudurka, MSF waxey go’aansatay in xaruntaas la xero 20ka May. Laakiin MSF waxey kor kala socon doontaa xaaladda xaafadaha ku yaala agaarka Balcad, iyadoo ay dadka kasii wacya gelin doonto sida looga hortago cudurka.
Dacuunka waa cudur khatar ku ah gobolka, sanad walbana waxaa uu ku dhacaa dadka. Cudurka waxaa faafiya baktiiriyaha loo yaqaana vibrio cholerae, kasoo ka dhasha goobaha biyaha laga hela kuna sii faafa dadka. Sanadkii la soo dhaafay, kooxaha MSF waxey Balcad ka sameeyeen xarun lagu daaweeyo cudurka waxaana halkaa la dhigay ilaa iyo150 bukaan ah. In jirka ay biyaha ka dhamaadaan ayaa ah sababta ugu weyn ee dacuunka uu usababo dhimashada bukaanka, waxaana sidaa darted fiican in dadka xanuunkaas qabo ay booqdaan xarunta caafimaad ee ugu dhow. Ka hortaga cudurka sida- cabidda biyo nadiif ah oo la kululeeyay, in gacmaha lagu dhaqdo saabuun iyo isticmaalka
musqulo haboon waxey ka hortagaan faafitaanka cudurka. Sidoo kale daaweeynta goobaha biyaha laga hela. Caruurta ayaa ku jira khatarta ugu weyn. Ilaa 50% bukaanka uu cudurka haleelo waxaa ay khatar ugu jiraan dhimasho haddii aan wakhti haboon la daaweynin.
MSF waxaa ay cudurka daacuunka ugu hortagtay gobolka Shabeelaha Dhxe si deg deg ah. Hay’adda ma kordhin doonto howlaheeda, dalka kama furi doonto mashruuc cusub ilaa shaqaalaheeda - Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut – oo laga afduubay Dhadhaab hadana lagu haaya Soomaaliya tan iyo Oktoobar 2011 ki ,ay dib ugu biiraan qoysaskoodu.
Tags: Middle shabelle, MSF, Somalia, South Central Somalia